पौरखी Archives - Page3of5- Sagarmatha Online News Portal
लुगा सिलाएरै जीवन गुजार्दै ग्रामीण महिला
दार्चुला । वर्षौंदेखि चुलोचौको र घाँस दाउरामा सीमित दार्चुला जिल्लाको ग्रामीण भेगका महिला लुगा सिउने सीप सिकेर घर बसीबसी मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । वर्षौंदेखि घाँस दाउरा गर्दै जीवन जीउँदै आएका यहाँका महिला अहिले सिलाइ कटाइसम्बन्धी सीप आर्जन गरेर आत्मनिर्भर बनिरहेका हुन् । कोट, पाइन्ट स्काप र स्विटर सिलाउने तथा बुन्ने प्रशिक्षण लिएर ग्रामीण भेगका महिला अहिले मासिक हजारौँ बचत गर्न सफल भएका छन् । ...
२४ वर्षमा सिउँदो पुछिएपछि जुत्ता सिलाएर आत्मनिर्भर बन्दै देवी
रोल्पा । बाबुआमाको खुशीका लागि १६ वर्षको कलिलो उमेरमा डोली चढेकी साविकको रामपुर गाविस–२ दाङकी देवी नेपालीको २४ वर्षको उमेरमा सिउँदो पुछियो । आम मानिसमा जस्तै जिन्दगी रंगीन बनाउने सपना उनमा पनि थिए । तर छोरी भएकै कारण देवीले आफ्ना लागिभन्दा पनि परिवारको खुशीका लागि समर्पित हुनुपथ्र्याे । अभाव र गरिबीका कारण ४ कक्षाको पढाइलाई बीचमै रोकेर घरधन्दामा लागेकी देवी चाहेर पनि केही गर्न सक्दिनथिन् । ...
पुनर्जन्म पाएर बाँचिरहेको छु : थगेन्द्र बाहिङ राई
हरेक मानिससँग सम्पत्ती भएपछि उसको इच्छा र आकांक्ष सुविधा सम्पन्न शहरबजारतिर घरजम गरेर बस्ने हुन्छ । मानिसलाई चाहिने आधारभूत आवश्यकता समेत नभएको विकट गाउँमा जो कसैलाई पनि बस्ने इच्छा हुँदैन । हामीले पनि त्यस्तै देख्दै र भोग्दै आएका छौं । तर कोहि मानिसहरु यस्ता हुन्छन्, उनीहरुलाई सुविधा सम्पन्न शहरबजारको रौनकले केहि प्रभाव पार्दैन । उनीहरुलाई त्यही अभाव, समस्या र विकट क्षेत्रको उकाली ओरालीमा जीवन बि...
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा स्थापित गायक, गायिकाहरु यो पेशाबाट पलायन हुने क्रम दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । र यो क्षेत्रमा आउने युवापुस्ताका नव गायक, गायिकाहरुको लर्को पनि उत्तिकै छ । सञ्चार र प्रविधिले पछिल्लो समयमा पहिलेका गायक, गायिकाहरुलाई धेरथोर असर पारेको नै छ । सञ्चार र प्रविधिमैत्री हुन नसक्नु उनीहरुको कमजोरी देखिएको छ । त्यही कारणले गर्दा कतिपय स्थापित कलाकार, गायक, गायिकाहर...
के के गरे यज्ञराज सुनुवारले ३ वर्ष ८ महिनामा ?
ओखलढुंगा । संसदीय राजनितिमा एक छत्र राजगर्दै आएको नेपाली काँग्रेसको गढ भत्काउँदै पहिलो पटक एमालेको उम्मेदवार निर्वाचित भएको इतिहास बनाएका एमाले केन्द्रिय सदस्य यज्ञराज सुनुवार ०७० मंसिर ४ गते भएको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा ओखलढुंगा क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित हुँदा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष थिए । संविधान सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएलगत्तै पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलगभइ संविधान निर्माणको काममा जुटे...
कामको सन्तुष्टि नै पहिलो सफलता हो : टंकराज होङेलु
काठमाडौं । ‘जीवनमा सफल बन्नको लागि रुची भएको पेशा र व्यवसायको ट्रयाक पक्रेपछि निरन्तर रुपमा लागिरहनु पर्छ, त्यो जुनसुकै क्षेत्रमा होस’ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ युवा व्यवसायी टंकराज होङेलु कुलुङको । छोटो समयमै मार्केटिङ व्यवसायको क्षेत्रमा सफलताको खुड्किलो पार गरेका कुलुङ एक सफल व्यवसायी हुन भन्दा दुई मत नहोला । कुलुङले विगत सम्झदै भने ‘शुरुमा मैले मार्केटिङ गर्दै गर्दा मलाई ह्यारेसमेन्ट भएको थ...